Prometheus In The New Age: စစ်ခွေးတို့၏ အလံသစ် နှင့် အောက်လမ်း အစီအမံ
စစ်ခွေးတွေက နိုင်ငံတော် အလံသစ်လွှင့် တင်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေဟာ အထက်အာဏာပိုင်တွေက ဗေဒင်ကိန်ခန်းအတိုင်း အချိန်နာရီ၊ နေ့သင့်နံသင့် မွေးနေရှင်တွေကအစ အတိအကျ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်စာကို ကြံ့ဖွံ့တွေ အကြားမှ ယခင်ကတည်းက လျှို့ဝှက်ဖြန့်ချိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ နိုင်ငံတော်အလံ စတင်လွှင့်ထူ ခြင်း”
ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် အလံဟောင်းနှင့် အလံသစ်ကို လဲလှယ်လွှင့်ထူရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်
၁။ အလံနှစ်ခု လဲလှယ်သည့် အချိန်တွင် အလံတိုင်၌ နိုင်ငံတော်အလံ လစ်ဟာသွားခြင်း မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂။ အလံလဲလှယ် လွှင့်ထူမည့်သူများအဖြစ် နေ့သင့်နံသင့် အလိုအရ အင်္ဂါနေ့ မွေးဖွားသူတဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးဖွားသူတဦးတို့ ဆောင်ရွက်စေရမည်။
၃။ အလံလဲလှယ် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်တွင် ၀န်ကြီးဋ္ဌာန၊ ဦးစီးဋ္ဌာန နှင့် အခြားဌာနများအလိုက် တက်ရောက်နိုင်သော အကြီးအကဲများနှင့် ၀န်ထမ်းများ အလံတိုင်ရှေ့တွင် စုရုံးရမည်။
၄။ အလံတော်အသစ်ကို အင်္ဂါသား၏ ပုခုံးပေါ်တွင် အသင့်တင်ထားပြီးနောက် အလံဟောင်းကို တိုင်ထိပ်မှ ဖြေးညင်းစွာ လျှောချရမည်။ ထိုသို့လျှောချစဉ် ကြိုးများကိုဆွဲရာ၌ အင်္ဂါသား၏ လက်များသည် ဗုဒ္ဓဟူးသား၏ လက်များ အထက်တွင်ရှိရမည်။
၅။ အလံဟောင်းသည် အလံလဲလှယ်သူများ၏ ခါးလည်ခန့် ရောက်လာသည့် အခါတွင် အလံဟောင်းကို မဖြုတ်သေးပဲ ဗုဒ္ဓဟူးသား၏ ပုခုံးပေါ်တွင် တင်ထားဆဲတွင် အလံဟောင်း၏ အထက်နေရာ၌ အလံသစ်ကို တပ်ဆင်ရမည်။
၆။ အလံသစ်ကို ချည်နှောင်တတ်ဆင်ပြီးသောအခါတွင်မှ အလံဟောင်းကို ဖြုတ်ရမည်။
၇။ ထို့နောက် အလံသစ်ကို တိုင်ထိပ်သို့လွှင့်တင်ရမည်။ လွှင့်တင်သည့် အချိန်တွင်လည်း ကြိုးများကိုဆွဲရာတွင် အင်္ဂါသား၏ လက်များသည် ဗုဒ္ဓဟူးသား၏ လက်များ အထက်မှ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၈။ အလံလွှင့်တင်ချိန်တွင် နိုင်ငံတော် သီချင်းကိုဖွင့်ရမည်။
၉။ အလံသစ်ကို တင်ပြီးလျှင် တက်ရောက်လာသူ အားလုံးနိုင်ငံတော် အလံအား အလေးပြုရမည်။
၁၀။ နိုင်ငံတော်အလံသစ် လွှင့်တင်သည့် အခမ်းအနားသည် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသည့် ဟင်းလင်းပြင်တွင် ပြုလုပ်ရမည် အမိုးအကာအောက်တွင် မပြုလုပ်ရ။
၁၁။ အခမ်းအနားဆောင်ရွက်နေစဉ် မိုးရွာလျှင်လည်း အစိုခံ၍ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(မှတ်ချက်- ထီးမဆောင်းရ ၊ ဦးထုပ်မဆောင်းရ ၊ မိုးခိုလှုံမှု မပြုလုပ်ရ)
အလံသစ်လွှင့်ထူမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားရန် ဖြစ်သည်။
၁၂။ အလံဟောင်းကို နိုင်ငံတော်အလံ ဥပဒေနှင့်အညီ တာဝန်ရှိသူများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးရမည်။ ( အဘညွှန်ကြားချက် – မီးရှို့လျှင် အိုးအလွတ်၊ ပုံးအလွတ်ထဲတွင်ထည့်၍ ပြာကျအောင် မီးရှို့ပါ၊ ပြီးလျှင် ပြာကိုမြစ်ထဲ မျှောပါ။)
***မှတ်ချတ်…အဘညွန်ကြားချက် နေရာတွင် စစ်ခွေးညွန်ကြားချက် ဟုခေါ်ပါရန်။
နိုင်ငံတော်အလံသစ်ကို နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။
ဆိုပြီးတော့ ညွှန်ကြားချက်တွေ ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်ခွေးတွေ ဘယ်လောက် အယူသည်းတယ်ဆိုတာ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ အောက်လမ်းနည်း လုပ်ရပ်၊ အစီအမံများ၊ သူတပါးကို နာမ်နှိမ်လိုသော အပြုအမှုများတွင် တွေးကြည့်နားလည် နိုင်သည်။
ပညာရပ်ပိုင်းအရ ဗုဒ္ဓနဲ့ ဓမ္မယတြာ၊ အထက်လမ်း ဆိုင်ရာ ယတြာနဲ့ အောက်လမ်း ဆိုင်ရာ ယတြာရယ်လို့ ယတြာ ချေနည်း အုပ်စု ၃စု ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓနဲ့ ဓမ္မ ယတြာကတော့ အစွမ်းဆုံးနဲ့ ဘယ်သူမှ အန္တရာယ် ပေးလို့ မရတဲ့၊ မနိုင်နိုင်တဲ့ အထွဋ် အမြတ်ဆုံး ယတြာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓနဲ့ ဓမ္မကို ရင်ထဲမှာ ကိန်းထားရင် အထက်လမ်း၊ အောက်လမ်း အစီအရင်များ မည်မျှပင် ထက်မြက် နေပါစေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တန်ခိုးတော် အနန္တ အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်သွားတာပါ။ ဗြဟ္မာမင်း တချို့ကိုတောင် ပူးဝင် နှိပ်စက် နိုင်တဲ့ မာရ်နတ်မင်းနဲ့ သူ့စစ်သည် တို့ကိုတောင် အောင်နိုင်ထားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်နဲ့ အဆုံးအမတို့ကို နှလုံးသား ထဲ ကိန်းဝပ်ထားတဲ့ လူတိုင်းဟာ ၀ဋ်နာကံနာ ကြောင့်က လွဲလို့ မည်သူ့ရဲ့ နှိပ်စက်မှု ကိုမှ မခံရနိုင်ပါဘူး။ မည်သူကမှ စိတ်ညှို့လို့ မရသလို ဘယ်နတ် ကမှလည်း ပူးဝင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်အစီအရင် ကမှလဲ ဒုက္ခ မပေးနိုင်ပါဘူး။ တခြား ဘာနည်းကမှ သည် ဗုဒ္ဓနဲ့ ဓမ္မယတြာကို ကျော်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။
အထက်လမ်းဆိုင်ရာ ယတြာကတော့ အဆောင်နဲ့ အကျင့် ၂မျိုးရှိကာ အဆောင်တွင် အင်း၊ ဓာတ်လုံး၊ ဓာတ်ဆင်၊ ဓာတ်ရိုက်၊ ဇော်ဂနီ ဇော်ဂနက် စမရုပ် များ အသက်သွင်း မန်းမှုတ် ခိုင်းစေခြင်း၊ သျှိုရုပ်များ ထုလုပ် စီရင် ထားခြင်း၊ အကျင့်တွင် အဓိဌာန် ၀င်ခြင်း၊ ဂါထာ မန္တာန်များ ရွတ်ဖတ် ခြင်း ( ဓမ္မယတြာမှ ဂါထာများနှင့် မတူသော သက်ဆိုင်ရာ ပညာပိုင်း ဂါထာများဖြစ်ပြီး ကျင့်စဉ်ပါသော ဂါထာများ နှင့် ကျင့်စဉ်မပါသော ဂါထာများ ၂မျိုး ရှိပါသည်) အစရှိ သည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အောက်လမ်းနှင့် အထက် လမ်း ပညာခန်း ၂ရပ်မှာ ရန်ဖက်များ ဖြစ်ကြပြီး ယင်းတို့ နှစ်ဖက်တွင် မည်သူ သာသည်ဟု တထစ်ချ လှေနံ ဓားထစ် ပြောလို့ မရနိုင်ဘဲ အစီအရင်များ စီရင်နေဆဲတွင် အနှောင့်အယှက်များ အပြိုင်ဝင် လေ့ရှိရာ ပိုအား ကြီးသူ နိုင်လေ့ရှိပြီး အစီအရင်တချို့ ပျက်စီးသည် များလည်း ရှိတတ်ပြီး ပျက်မှန်း မသိ ပျက်သော အစီ အရင် များကို (အင်း၊ ဓာတ်လုံး စသည်) အကောင်း ထင်မှတ် သုံးဆောင် မိပါက ဒုက္ခရောက် တတ်ကာ ပြန် ဖြေရ ခက်တတ် ပါသည်။ ထို့ပြင် ထိုအင်းများ ဓာတ်လုံးများကို စီရင်ချင်တိုင်း စီရင်လို့ မရနိုင်ဘဲ အဆင့် တစ်ဆင့်တိုင်းကို နက္ခတ် အချိန်စောင့်ရင်း လိုအပ်သော သမထနှင့် ကျင့်စဉ်များ အဓိဌာန်များ ၀င်ရင်း စီရင် ရသည် ဖြစ်ရာ ပလူပျံအောင် ထုတ်လုပ်ပြီး မိတ္တူကူး ထားသော အင်းချပ်များ၊ ပေါပေါ လောလော ရနေ သော ဓာတ်လုံးများ မည်သို့မှ အစစ်အမှန် မဖြစ်နိုင်ပါပေ။ တိုက်ရင်ပြောင် ဆောင်ရင်လေး ရေစိမ်သောက် ရင် သေးပေါက် သလောက်သာ စွမ်းသော ဓာတ်လုံးသာ ဖြစ်ချေမည်။ အထက်လမ်း ယတြာ များသည် အစစ်အမှန် အစင်အကြယ် ရနိုင်လျှင် သူတပါးရဲ့ ရန်စွယ် ရန်ပြုခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းနဲ့ မိမိ ကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်း များအတွက် လည်းကောင်း၊ မျက်နှာပွင့်ခြင်း၊ စီးပွားကောင်း၊ ဈေးခေါ် ကောင်းခြင်း စသည်တို့ အတွက် အသုံးကျ လေသည်။
အောက်လမ်းဆိုင်ရာ ယတြာခေါ် အစီအရင်များကတော့ သူတပါးကို ဒုက္ခ ပေးဖို့ လုပ်တာ များလေသည်။ အောက်တန်းကျသော အကြံအစည် တို့နဲ့ စီရင် ပြုလုပ် လေ့ရှိသော အစီအရင် ဖြစ်သောကြောင့် အောက် လမ်း ဟုခေါ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ထို အစီအရင် များတွင် စုန်းတိုက်၊ သရဲတစ္ဆေ မွေးထားပြီး မကောင်း ရာတွင် ခိုင်းစေခြင်း၊ အပင်းလုံး သွင်းခြင်း၊ စိတ်ညှို့ပြီး လိုရာခိုင်းခြင်း၊ ယုတ်ညံ့ သည်ဟု သတ်မှတ်ခံ ရလေ့ ရှိသော မီးနေသည် ရဲ့ လုံချည်ကို အသုံးချခြင်း (တလွဲ အသုံးချမည် စိုးသောကြောင့် မဖော်ပြပါ) စသည် တို့သည် အောက်လမ်း ဆိုင်ရာ ဓာတ်ဆင် ဓာတ်ရိုက် ခြင်း များ ဖြစ်ကြပြီး အများဆုံး လုပ်လေ့ရှိသည်မှာ အစားအစာ ထဲသို့ အဆိပ် မဟုတ်သော အောက်လမ်း ဆေးခတ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ထဲသို့ ခုံဖိနပ်၊ ဆံပင် ချည်ထွေး၊ တိရစ္ဆာန် များ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများ ထည့်သွင်း ထား ခြင်း နှင့် ချစ်သူ၊ မုန်းသူအတွက် အရုပ် စီရင်ပြီး ထိုအရုပ်ကို ထိုသူရဲ့ ဓာတ်သွင်းပြီး ရောဂါဖြစ်စေခြင်း၊ ထိုအရုပ်ကို စိတ် ညှို့ပြီး လိုရာခိုင်း ခြင်း၊ ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနှင့် အရုပ်ကို ခေါင်းတပိုင်း ကိုယ်တပိုင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် များစွာ သော မကြံစည် တတ်နိုင် လောက်သော ရှာရှာဖွေဖွေ နည်းလမ်းများ ရှိလေသည်။
ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ကိုယ့် ထံပြန် ဆိုသလို သည်လမ်းကို လုပ်သူရော၊ အသုံးချသူပါ မကြာခင် ပြန်ဝဋ်ခံရ လေ့ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် အသုံးချခံ ရသူက သီလ၊ သမာဓိ ရှိသူ ဖြစ်နေပါလျှင် ထိုသူကို သက်ရောက်မှု မရှိဘဲ တန်ပြန်ကာ စီရင်သူ နှင့် စီရင် ခိုင်းသူ တို့သာ ပိုမို ဒုက္ခရောက်ကာ တန်ပြန် ဒဏ်ခတ်မှုကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြန်ခံရလေ့ ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် အကောင်းဆုံးမှာ ဗုဒ္ဓနှင့် ဓမ္မ ယတြာ စစ်စစ်များကိုသာ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် ကြည်လင် အေးချမ်း သော စိတ်ဖြင့် ကျင့်သုံး လိုက်နာ ကြရင်း လောကီရော လောကုတ္တရာပါ နှစ်ဖြာသော အကျိုး စီးပွားများကို ရယူ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေ။
၂၃. အောက်တိုဘာလ. ၂၀၁၀
အင်တာနက်ရှိ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အလင်းဆက် at 11:18 PM